Yoma Bank - Loans - Home Loan
သင့်နေအိမ်သစ် တံခါးကို ယနေ့ပဲ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါ
Build your better life with YOMA HOME LOAN
Land & Building, Condo - up to 25 years - 30% down payment
Apartment – up to 15 years - 30% down payment
13% Interest p.a
1.5% Processing Expenses (one time – include assessor & lawyer fees)
Simple, & easy digital process
3% early repayment fee on the outstanding principal if paid within the first 1 -3years
Click HERE to download the brochure in Myanmar version.
To find out more call our friendly Home Loan team at 9662 or 097-9662-9662
ရိုးမဘဏ် အိမ်ရာချေးငွေအတွက် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်
ရိုးမဘဏ်၏ အိမ်ရာချေးငွေရယူရန် နီးစပ်ရာ ရိုးမဘဏ်ခွဲသို့ ဆက်သွယ်၍ အိမ်ရာချေးငွေ ဝန်ထမ်းနှင့် အိမ်ရာချေးငွေ၊ ကနဦးခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ၊ လစဉ်ပေးဆပ်ရမည့် ပမာဏ၊ အတိုးနှုန်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား နားလည်အောင်ဆွေးနွေးပါ။
ရိုးမဘဏ်၏ အိမ်ရာချေးငွေ ကနဦးခွင့်ပြုပမာဏကို လျှောက်ထားရယူပါ။
အိမ်ရာချေးငွေ ကနဦးခွင့်ပြုပမာဏရရှိပါက ခွင့်ပြုထားသော ပမာဏနှင့် ကိုက်ညီသော အိမ်ရာကို ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ချေးငွေလျှောက်ထားရန် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို စတင်စုစည်းပါ။
ရောင်းချသူနှင့်သဘောတူညီမှုရရှိလျှင် လျှောက်ထားသူနှင့် ရောင်းချသူဘက်မှ လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ရိုးမဘဏ်ခွဲသို့ လာရောက်လျှောက်ထားပါ။
စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံပါက ရိုးမဘဏ်အိမ်ရာချေးငွေ ကျွမ်းကျင်သူမှ ရက်သတ္တပတ် (၂) ပတ်မှ (၃) ပတ်အတွင်း ရာဖြတ်ခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုစစ်ဆေးခြင်း၊ ဝင်ငွေအထောက်အထားများ ပြုလုပ်ပြီး အိမ်ရာချေးငွေ ခွင့်ပြု၊ မပြုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရရှိပါမည်။
Other loan services includes:
The Yoma Bank Term Loan isabusiness loan backed by eligible collateral withaone-year tenor.
Yoma Bank’s Overdraft facility allows you the flexibility of drawing and repaying your loan according to your needs.
Yoma Bank’s Temporary Overdraft loan supports your short term financing needs.
Yoma Bank’s Lien loan isashort-term loan backed by your Yoma Bank Savings or Fixed Deposit account.